सावधान ! कारमा एसी चलाएर बस्दा क्यान्सरको शिकार बन्नु पर्ला - Kantipath.com
के तपाईको कारमा पनि एसी छ ? त्यसो हो भने सावधान रहनुस् । किनभने तपाई क्यान्सर रोगी पनि बन्न सक्नु हुनेछ । हो, यो कुरा वास्तविक हो । तपाई यो थाहा पाएर आश्चर्यमा पर्नु होला तर अध्ययनबाट यो कुराको पुष्टि भएको हो । विशेषगरी त्यस्ता मानिसमा यसप्रकारको क्यान्सरको खतरा सबैभन्दा बढी रहने गर्दछ जो धेरै बेर शिशा बन्द गरिएको कारमा बस्ने बित्तिकै एसी संचालन गर्दछ ।
तपाई यसो सोचेर हेर्नुस तपाई जब कारमा छिरेर बस्नु हुन्छ वा कार स्टार्ट गर्नु हुन्छ तब बाफिलो, प्लास्टिकजस्तो हल्का गन्ध महशुस गर्नु भएको होला । के तपाईले कहिल्यै सोच्नु भएको छ यो गन्ध आखिर के कुराको हो र कहाँबाट आउने गर्दछ ?
वास्तवमा जब हामी कारको चारै ढोका र शिशा बन्द गर्दछौ, तब त्यसका रहेको ड्यास बोर्ड, सीट, एसीको डक्टसलगायतका बस्तुहरु जुन प्लास्टिक वा फाइबरबाट बनेको हुन्छ, त्यसले बेन्जिन ग्यास छोड्ने गर्दछ । बेन्जिन एकप्रकारको विषालु र निकै हानिकारक ग्यास हो, जसले क्यान्सर उत्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । यस्तो स्थितिमा जब तपाई कारमा प्रवेश गर्नु हुन्छ, शिशा खोल्नुको साटो तत्काल एसी संचालन गर्नु हुन्छ भने यो ग्यास वायुको अणुहरुका साथ स्वास लिने बेलामा तपाईको शरीरमा प्रवेश गर्दछ, जुन तपाईका लागि अत्यन्तै हानिकारक हो।
बेन्जिन ग्यासले तपाईलाई क्यान्सरको शिकार मात्र बनाउँदैन, बरु तपाईको हड्डीहरुमा पनि विषालु प्रभाव छाड्ने गर्दछ । यसले तपाईको रगतमा रहेको श्वेत रक्त कणहरुलाई नष्ट गरिदिन्छ, जसबाट तपाईको शरीरको प्रतिरोधक क्षमता कम हुन लाग्दछ । यसका साथै तपाईको शरीरमा बेन्जिनको दुष्प्रभाव, एनीमिया र ल्युकेमियाको रुमा पनि देखिन सक्दछ ।
गर्भवती महिलाहरुमा यसको प्रभावबाट गर्भपात पनि हुन सक्दछ । यति मात्र होइन बेन्जिनले तपाईको मृगौला र कलेजोलाई पनि सिधैं प्रभावित गर्दछ । र, यसमा सबैभन्दा खतरनाक कुरा हाम्रो शरीर यो ग्यासलाई बाहिर निकाल्न र यसको दुष्प्रभावबाट बच्न पूर्णरुपमा असमर्थ छ।
सामान्यतः कुनै पनि बन्द स्थानमा बेन्जिन ग्यासको मानक स्तर ५० मिलिग्रामप्रति वर्गफीट हो । यस्तै बन्द स्थानमा पार्क गरिएको बन्द शिशा भएको कारमा बेन्जिनको मात्राको स्तर ४०० देखि ८०० मिलिग्रामसम्म हुन्छ, जुन मानकस्तभन्दा कम्तीमा पनि ४० गुना बढी हो । यस्तोमा शिशा बन्द गरिएको कारमा हतारहतार गएर बस्नु, त्यहाँ अत्यधिक मात्रामा रहेको विषालु बेन्जिन ग्यासलाई स्वासको माध्यमबाट आफ्नो शरीरमा प्रवेश हुन दिनु क्यान्सर र अन्य रोगहरुलाई आमन्त्रण गर्नु सरह हो । एजेन्सी
Previous Previous post: १० वर्षपछि सकियो काबेली करिडोर प्रसारण लाइनको दोस्रो खण्ड
Next Next post: नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु
पेशाकर्मी, मजदुर, उद्योगी र युवा–विद्यार्थीलाई सङ्गठित गर्न जुट्यो एमाले
क्रान्तिकारीको प्रथम बागमती प्रदेश सम्मेलन असोज ११ गते
नेपालमा नयाँ बर्ड फ्लु भाइरस भित्रियो, सतर्क रहनू : विश्व स्वास्थ्य संगठन
नेपालमा असुरक्षित गर्भपतन ५८ प्रतिशत
गौतमबुद्ध सामुदायिक अस्पतालमा मुटुको उपचार निःशुल्क
मस्तिष्कसम्बन्धी जटिल रोगबाट पीडित गौतमको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क
नौ सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई सेनिटरी प्याड वितरण